आफ्नो आवाज नहराउनुहोस् | Martech Zone
आफ्नो आवाज गुमाउनु हुँदैन
आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 10 आइतवार, मार्च १,, २०१। Douglas Karr
मैले हालसालका पोष्टहरू केहि मानिसहरूबाट प्रतिक्रिया पाए सुक्खा। म त्यसका साथ बहस गर्ने छैन - हामी उपकरण र लेटको सुविधाहरूमा गहिरा खोजी गर्न व्यस्त छौं। यस्तो देखिन्छ कि हामी हाम्रो अनुसन्धान जति गहिरो गर्छौं, यो संक्षिप्त पोष्ट लेख्न कडा छ कि प्लेटफर्ममा न्याय गर्दछ तर अझै पनी तपाईंको आवाज सुन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
मेरो यो साथी ब्लगको एक उत्सुक पाठक हो, र यसमा पनि लेख्छ, त्यसैले म सुन्दै छु र म केही परिवर्तनहरू गर्न जाँदैछु। प्रत्येक पोष्टको साथ, म तपाईंसँग कुराकानीमा अधिक र color्ग थप्न जाँदैछु। Martech Zone कसरी प्रविधिको मार्केटरहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भन्नेमा एक धेरै आशावादी दृष्टिकोण लिन्छ। विडम्बना यो हो कि म जस्तो आशावादी छैन। मलाई यस्तो लाग्छ कि उपकरणहरूको क्षेत्र हामीलाई सहयोग गर्न फराकिलो र पातलो छ - क्रस-च्यानल मार्केटिंग प्रणालीहरूको लागि अधिक अवसरको साथ जसले हामीलाई सम्भावितहरू र ग्राहकहरूसँग हाम्रा सञ्चारहरूलाई भेला गर्न, मापन गर्न र अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी यसमा थप आवाजहरू थप्ने बारेमा पनि सोचिरहेका छौं Martech Zone। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ एक राम्रो मार्केटिंग वा टेक्नोलोजी दिमाग जोड्ने अवसर छ जो न्यू योर्क, बोस्टन, वा सान फ्रान्सिस्कोको प्रमुख मार्केटिंग केन्द्रहरूको वरपर हुन सक्छ। यदि तपाइँ एक टेक्नोलोजी लेखक हुनुहुन्छ ... विशेष गरी विनोदको भावना भएका, हामी तपाइँसँग कुरा गर्न चाहन्छौं। हाम्रो खोज यति टाढा बढि नेतृत्वको परिणाम भने आएको छैन।
ट्र्याकमा फर्कनुहोस् ...
सामग्री लेख्न मात्र लेख्नु हुँदैन। तपाईं हाम्रो सामग्री ebbs र प्रवाह याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको केही हाम्रो कामको बोझको कारणले हो, तर प्राय: जसो भन्नुपर्दैन, यो भन्नु हाम्रोलागि केहि महत्वपूर्ण भन्नुको छैन। हामी प्रत्येक ब्लग पोष्ट मार्केटरहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं। प्रत्येक पोष्ट
साथै, हामीले हाम्रो पोडकास्ट, ईमेल प्रोग्राम र भिडियोहरूको साथ आफ्नो आवाज विस्तार गरेका छौं। हामीसँग टोलीमा सामेल भएका छौं वेब रेडियोको किनारा केहि राम्रो भिडियोको साथ एक पेशेवर रेडियो कार्यक्रम (स्थानीय रूपमा प्रसारित) उत्पादन गर्न। ट्युन गर्न निश्चित हुनुहोस् - तपाईं हाम्रो मार्फत हामीलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ आईफोन अनुप्रयोग, iTunes, Stitcher र Youtube.
मलाई निश्चित छैन कि कसले "सोशल मिडिया" शब्द लेख्यो, तर उनीहरू शानदार थिए। सामग्री मिडिया हो ... तर आवाज बिना सामग्री सामाजिक छैन, यो मात्र हो औसत। आफ्नो आवाज नहराउनुहोस्। यसलाई सामाजिक राख्नुहोस्।
टैग: मार्केटिंग पोडकास्टव्यक्तित्वशैलीआवाज
ट्विटर विज्ञापन प्रत्येक $ ०. .२0.823 मा अनुयायीहरू थप्दै